Diyo post :: सिपी गजुरेल क. गौरवको रकमी र काइते लेखको विश्वास नगरौँ’ सिपी गजुरेल क. गौरवको रकमी र काइते लेखको विश्वास नगरौँ’ - Diyo post
वास्तवमा कमरेड गौरवका भनाइ आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छन् । यो कुरा उहाँको अर्को लेख ‘साम्राज्यवादी देशमा बढ्दो अन्तर्विरोध’ बाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । एकातिर उहाँ विश्व परिस्थित प्रतिकूल छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर ‘विश्व परिस्थिति र एकदेशमा हुने क्रान्ति’ र ‘विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट’ मा आफ्नै भनाइ विपरीत व्याख्या गर्नुहुन्छ । जस्तो उहाँ भन्नुहुन्छ : “यो कुरा सत्य हो कि विश्वस्तरमा कम्युनिस्ट आन्दोलन शक्तिशाली भएको भए संसारका धेरै देशमा क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था थियो ।” अवश्य पनि हो, विश्वको स्थिति अनुकूल भएर पनि आत्मगत कमजोरीका कारण क्रान्तिले गति लिन सकेको छैन । यतिखेर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नै आशाको केन्द्र बनेको छ । साथसाथै प्रतिक्रियावाद र साम्राज्यवादी आतङ्कले मात्र नभएर दक्षिणपन्थी अवसरवादले पनि सर्वहारावादी क्रान्तिमा ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै सत्य हो । यस्तो बेला जनयुद्ध चलिरहेका देशका आन्दोलनहरू खास गरेर भारतमा चलेको जनयुद्धलाई बढीभन्दा बढी सहयोग र समर्थनको आवश्यकता छ । परन्तु यस कार्यमा कमरेड गौरवहरूको भूमिका अलिकति पनि सर्वहारवादी अन्तर्राष्ट्रियतावादी मूल्यअनुरूप हुन सकेन । यो तीतो सत्यलाई कमरेड गौरवहरूले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।
साँचो कुरा के हो भने कमरेड गौरवले छलफलका लागि पठाएको दस्ताबेजलाई माओवादी पार्टी इटाली लगायत नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माणमा लागेका पार्टीहरूले प्रचण्डप्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको, कार्यदिशामा प्रस्टता नभएको, भाइचारा पार्टीहरूको प्रयासप्रति बेवास्ता गरेको आदिआदि भनेर खारेज गरिदिएका हुन् । यसको प्रमाणका लागि माओवादी पार्टी इटालीले जनवरी २०१५ मा तत्कालीन नेकपा –माओवादीलाई लेखेको चिठीलाई लिन सकिन्छ, जसलाई नेक्स्ट फ्रन्टले अनुवाद गरी प्रकाशित गरेको थियो । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा चार वर्षसम्म पटक्कै चासो नदिनु अहिले आएर अपरिचित भनेर होच्याउनु र २ वर्षअघि आफूले उठाएको भनेर श्रेय लिन खोज्नु भनेको बेइमानीसिबाय केही होइन । यो बब अभाकियनवादी ठालुवादकै अर्को रूप हो ।